Shabelle Media Network – Shirkadaha Dahabshiil Group oo Tababarro Cilmi ah ku qaatay Muqdisho
Shirkadaha Dahabshiil Group oo Tababarro Cilmi ah ku qaatay Muqdisho
Muqdisho: (Sh. M. Network) Maareeyaha Guud ee Xawaaladda iyo Sarrifka Dahabshiil, mudane Cabdiraxmaan Cali Cabdi, ayaa u furay uga furay Hotel Beder Muqdisho maalintii Sabtida tababar aad loo soo agaasimay saraakiisha iyo hawlwadeennada shirkadaha Dahabshiil Group oo isugu jira xawaaladda, Bangiga iyo Ganacsiga Guud.
Tababarka oo soconayey hal maalin waxa intii uu socdey lagu soo bandhigay casharro aad u qiimo badan oo u kala qaybsamayey daryeelka macaamiisha, shuruucda lagu maamulo lacagaha isu-gudubkooda ee xalaasha ah iyo xidhiidhka Dadweynaha.
Waxa, ugu horrayntii, ku soo dhoweeyey tababartayaasha, , oo kor u dhaafay siddeetaneeyo, kana kala yimi dhammaan laamaha Dahabshiil Banadir madasha tababarka Maamulaha Guud ee Dahabshiil Banaadi, Cabdullaahi Nuurre Aw Diini.
Waxa Maamuluhu ka hadlay faa’iidooyinka tababarrada noocan oo kale ahi u leeyihiin tayaynta shaqaalaha iyo shaqada, isaga oo uga mahadceliyey saraakiisha tababrka waddey ee ka socdey Xarunta Hawlgalka ee Shirkadda ee Hargeysa, wakhtigaqaaliga ah ee ay u hureen hirgelinta tababarkan.
“Tayada shirkadda oo aad idinku wakiil uga tihiin macaamiisha iyo shirkaddaba goobtan wax weyn ayaa uga kordhaya duruustan haddii aad siisaan ahmiyadda ay leeyihiin kuna dhaqantaan,” ayuu yidhi Maamuluhu.
Maareeyaha Guud ee Xawaaladda iyo Sarrifka ee shirkadaha Dahabshiil, mudane Cabdiraxmaan Cali Cabdi, oo isagu si rasmi u furay tababrkan, ayaa ku boorriyey tababartayaasha ka-midho-dhalinta tababarkan, isaga oo ku adkeeyey inay u sii gudbiyaan hawlwadeennada aan tababrkan fursad u helin ee uga maqnaa goobta adeegga ay u hayeen macaamiisha darted, maadaama ay ahayd maalin shaqo.
“Macmiil idin soo gaadhay inaad kal iyo laab ku soo dhweysaan, ugu adeegtaan, oo ku faro adaygtaan ayaa la innooga baahan yihiin, waana xil saran saraakiisha iyo hawlwadeennada halkan manta isugu yimi, oo horeba u caddeeyeyey mugga iyo miisaanka ay shirkadda iyo macaamiishaba ku leeyihiin,” ayuu yidhi Maareeyaha Guud.
Waxa kale oo Maareeyaha Guud hoosta ka xarriiqay sida ay shirkadaha Dahabshiil Group mar walba iyogoob walba diyaar ugu tahay horumarinta, tayaynta iyo dhiirrigelinta hawlwadeennada Shirkadda meel kasta oo ay joogaanba.
“Kharaj iyo wakhti la geliyo tayaynta shaqada waa maalgelin loo sameeyey adeegga iyo daryeelka macaamiisha oo aad qaali ugu ah shirkadda,” ayuu yidhi Maareeyuh.
Intaa ka dib, waxa la wareegey tababarkii iyo daadihinttiisa saraakiishii iyo aqoonyahankii madasha ku sugnaa oo ay ka mid ahaayeen Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee Shirkadda, Professor Xasan Xiis, oo xidhiidhka dadweynaha ku tababarayey ka-soo-qayb-galayaasha, Cali Maxamed Goodir, madaxa shuruucda iyo qawaaniinta lagu maamulo lacagaha, oo isla mawduucaa soo gudbiyey, iyo aqoonyahan Yuusuf Faarax.
Waxa goob jog ka ahaa tababarkasaraakiil sare oo ay ka mid yihiin Cabdirxmaan Cali Xaaji Xasan, madaxa Horumarinta, Xirsi Barre, Maamule-ku-xigeenka Laamha Hargeysa iyo Xasan Axmed Barre, madaxada Suuqgeynta Dahabshiil Banaadir.
Waxa gebagabdii tababarka soo afmeeray Maamula ku Xigeenka Dahabshiil Benadir, Ibrahim Maxamed Ismaaciil, oo aad ugu dheeraaday mahadcelinta tababarayaasha iyo tababartayaasha iyo ahmiyadda ballaadhan ee tababarrada noocan ahi u leeyihiin shirkadda.